June 2011 « A.S.M.A
ပေါက်တော်မြို့နယ်၊ အင်ကရားချိုင်းကျွန်း၌ ဂီရိမုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များ ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွင်
ASMA (ရခိုင်ကျောင်းသားရဟန်းတော်များ) မှ ၎င်းဒေသကလူများအတွက် အရေး
တကြီးလိုအပ်သော အရေးပေါ်အကူအညီ(အုန်း၊၀ါး၊သစ်၊သံဖြူ)စသည်များ ဤကဲ့သို့
ASMA ကျောင်းသားများ၏ ဂီရိမုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များ ထောက်ပံ့ကူညီမှု
8:18 AM Share:
At her Harvard graduation, June 2009.
အိမ်မဲ့ လမ်းဘေးဘဝမှ ဟားရ်ဗားဒ် (Harvard) တက္ကသိုလ်သို့ …( Homeless to Harvard )
8:49 AM Share:
“How much is one human life worth” လူသားဘ၀တစ်ခုသည် ဘယ်လောက် တန်ရာတန်ကြေးရှိသလဲ..? ဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို ကမ္ဘာတစ်ဝှန်းရှိ တက္ကသိုလ်တို့၏ ထိပ်ဆုံးကနေရာကို ယူထားသော ဟားဗက်တက္ကသိုလ်ကြီးမှ Prof- Michael Sandel ၏ lecture တွင်ဖတ်ရှု နားထောင်ဖူးပါသည်၊ နားထောင်ဖတ်ရှုပြီး အတွေးစဉ်းစားခန်းများတသီကြီးဖွင့်ကာ ကမ္ဘာကြီးသို့ လူသားအဖြစ် ရောက်ရှိလာသော ကျွန်ုရို့၏တန်ကြေးကို စဉ်းစားနေမိသည်။
6:45 AM Share:
အိမ်မဲ့ လမ်းဘေးဘဝမှ ဟားရ်ဗားဒ် (Harvard) တက္ကသိုလ်သ...
ASMA ကျောင်းသားများ၏ ဂီရိမုန်တိုင်း ဒုက္ခသည်များေ...